‘हिजो आजका कुरा’ को प्रदर्शन स्थगीत - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
‘हिजो आजका कुरा’ को प्रदर्शन स्थगीत
प्रकाशित: १ बैशाख २०७७, सोमबार
काठमाडौं । ‘हिजो आजका कुरा’–दि मुभीको प्रदर्शन स्थगीत गरिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण बिश्वनै लकडाउनको अबस्थामा रहेकाले ‘हिजो आजका कुरा’ निर्माण कम्पनी पन्त फिल्म प्रोडक्सनले नयाँ बर्षको अबसरमा सोमबार एक बिज्ञप्ती जारी गरि सो जानकारी दिएको हो ।
बरिष्ट अभिनेता सन्तोष पन्तको कथा र निर्माणमा सकार पन्त निर्देशीत फिल्म बैशाख १२ गते प्रदर्शन हुने तयारीमा थियो । सोही अनुसार आफूहरु तयार रहेको भए तापनि अहिलेको बिषम परिस्थितिले गर्दा हाललाई फिल्म प्रदर्शन स्थगीत गरिएको निर्देशक साकारले बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । उनले कोराना भाइरसबाट बच्नका लागि संयमता अप्नाउन सबैलाई आग्रह गर्दै सम्पूर्ण नेपालीमा नयाँ बर्ष २०७७ को शुभकामना ब्यक्त गरेका छन् ।
‘यहाँहरुले हामी र हाम्रो चलचित्रप्रति देखाउनु भएको माया र भरोसाप्रति हामी नतमस्तक छौं । जनजीवन सामान्य अबस्थामा फर्किएपछि हामी हाम्रो चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति तय गर्ने छौं ।’ बिज्ञप्तीमा निर्देशक पन्तले उल्लेख गरेका छन् । उनले केही समयअघि सार्वजनीक आफ्नो फिल्मको ‘माया जदौ’ गीतलाई दर्शकले अत्याधिक मन पराएकाले आफूहरुलाईथप हौसला मिलेको र भबिष्यमा समेत अझ बढी माया र साथ पाउने आशा ब्यक्त गरेका छन् ।
समसामयिक बिषयमा निर्माण गरिएको फिल्ममा सन्तोष पन्त, साकार पन्त, रमा थपलिया, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा, दिब्यदेव पन्त, रिमा बिश्वकर्मा, जयनन्द लामा, जेविका कार्की, रमेश अधिकारी, बिनय कुँइकेल, अनुष्का अधिकारी, निराजनप्रसाद अर्याल, सबिन शाक्य लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । रवि सायमीले खिचेको फिल्ममा सन्दीप किस्नाको पटकथा छ । फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा प्रतिभा पन्त,सह निर्मातामा बैकुण्ठप्रसाद उपाध्याय (अशोक) र सचितकुमार मिश्र छन् । फिल्मको ‘माया जदौ’ गीत युट्युवमा अहिलेसम्म झण्डै ७७ लाख पटक हेरिसकिएको छ ।
नेपाली चलचित्रकी प्रथम नायिका निर्मित चलचित्र ‘साइनो’ युट्युवमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्दै
चौतर्फी विवादपछि वर्षा राउतले भनिन्– ‘गल्ती भयो, आइन्दा बोल्दा हेक्का राख्छु’
जुनुको जुत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड !
चलचित्र कलाकार संघमा फेरी अर्का सदस्यको राजिनामा
चलचित्र कलाकार संघबाट कलाकार नवराज श्रेष्ठले किन दिए राजिनामा ?
चलचित्र कोपिला डिसहोम मार्फत प्रर्दशन हुने
लकडाउनमा कर्णप्रिय गीत रुचाउनेहरुको लागी ‘ऋतुहरु’
अन्जु पन्त र राजन कार्कीको “उडुँ उडुँ लाग्यो” सार्बजनिक(भिडियो हेर्नुहोस)
चरि भए भुरुरु जान्थेँ उडेर पछि डिआर अटुले ल्याए अर्को मारुनी गीत ”शिरफुल” भिडियो सहित ।
वरिष्ठ गीतकार थापाको भोलि विहान १० बजे अन्त्येष्टि गरिने, गीतकार संघले ग¥यो शोक प्रस्ताव
राष्ट्रिय भावको गीत ‘देशै रोयो कोरोनाले’